ikhaya » imisebenzi » UMENZI MIZOBO
indawo: UMENZI MIZOBO
inkampani: IYunivesithi yaseCalifornia, uDavis
Indawo: Davis CA US
Ngaphantsi kweso sigqeba soMngcipheko weSiKhokelo soKhuseleko kunye neSiKhuseleko, esi sikhundla siza kunika ubunkokheli kwiCandelo loQeqesho lomsebenzisi (UX) kunye ne-User Interface (UI) kwiinkqubo zokuphuhlisa izicelo zewebhu ukuxhasa ukudluliselwa kwamashishini kuwo onke amaziko e-UC kunye namaziko enyango. Umntu onoxanduva uya kunika inxaxheba kunye nobunkokeli kulo lonke isebe ukuhlakulela amava omsebenzisi obumbeneyo kuzo zonke izicelo zengozi kunye nezoKhuseleko, ukuququzelela ukuhamba kweengqiqo kwiinkqubo ngendlela enembile. Ukubonelela ngeenkcukacha zomsebenzisi eziqhelekileyo ezibonisa ngokubambisana umzila owenziwe yi-UX design. Yenza umzobo okhangelekileyo wesimo somfanekiso wesigcawu, iifographics, iigos, iziboniso, amabhanki ewebhu kunye nokubekwa kweeprojekthi ezahlukahlukeneyo ezikhonza iimfuno eziyi-Multi-designed of Risk and Safety Solutions. Qinisekisa ukuba amawebhusayithi kunye nokushicilela abeendaba bahambelane nekampus kunye neYunivesithi yeWide yeWide design kunye nemigangatho yokubhengeza.
Sebenzisa iikhibhodi kunye nezixhobo zekhompyutha ukuze usebenze kwiimpawu zokudlulela ixesha elide.
Ukwahlula imibala ukudala amawebhsayithi anqwenela amakhasimende kunye nezikhokelo zokufumana inkxaso.
Sebenza kunye nabaxhasi ixesha elide.
Umqeshwa ngokwakhe uxanduva lokulandela izikhokelo zempilo kunye nezokhuseleko / imiyalelo.
Sebenza rhoqo iiyure ezicwangcisiweyo (8am5pm) ukuphendula iimfuno zabaxhasi lonke.
Sebenza ngezihlandlo ngezihlandlo, ngeempela-veki, okanye kwiholide ukuphendula kwixesha elide leprojekthi.
Ngenxa yeenkonzo eziphambili ezibonelelwe lisebe, esi sikhundla siza kusebenza enye okanye idibene ezongezelelweyo njengoko kudingekile ukuhlangabezana nemithwalo yemisebenzi ephakamileyo.
Sebenza nabathengi ngefowuni kwaye ufunde izikrini zekhompyutheni ixesha elide.
Uhambo oluya kwiindawo ezisuka kumaklayenti kwaye uphume kwi-campus.
I-UC Davis ngumsi kunye nentambo yokutya icuba ephumelelayo ngoJanuwari 1, 2014. Ukubhema, ukusebenzisa iimveliso zecuba, kunye nokusetyenziswa kweemveliso ze-nicotine ezingalawulwayo (ecigarettes) ziya kuvunyelwa ngokungqongqo kuyo nayiphi na i-UC Davis okanye eyakhiwe impahla, ngaphakathi nangaphandle, kuquka indawo yokupaka kunye neendawo zokuhlala.
Imvelaphi yokuHlola ifunekayo:
Esi sigxina sikhundla esibucayi kwaye kuxhomekeke kwisitshixo somxholo. Ingqesho ixhomekeke ekupheliseni ngempumelelo uphando kuphando kuquka imbali yolwaphulo-mthetho kunye neengxelo zokuhlola.
-Ubuchule bokuqulunqa ama-User Interfaces kunye namava ekusebenziseni i-web applications, ukubonelela nokujonga ngendlela ehambelanayo kwiiplatifti ezahlukeneyo ze-hardware kubandakanya: ideskithophu, ithebhulethi kunye nomnxeba weselula.
-Ukuqonda okungalunganga kokuyilwa kunye nokushicilela
-Ubuchule bokuqulunqa iiwebhusayithi ze-centric zokusebenzisana ukuze zidibanise umgangatho wobugcisa, ukusetyenziswa kunye nokubeka uphawu lweziko kwiziko elihlangabezane nemigangatho ye-ADA).
-Iziphumo zokudala iiwebhsayithi ezinikezela ngokuqhubekayo kwiziphequluli zewebhu ezikhokelayo.
-Ukuthengisa ukudibanisa umxholo, isakhiwo sokuhamba, kunye nokubonakala kwimeko ye-Web edibeneyo yomsebenzisi.
-Ubuchule bokuphucula amaphepha eWebhu kunye nemifanekiso yokukhuphela ngokukhawuleza kunye nomgangatho ocacileyo.
-Ubuchule obusebenzayo nemigaqo yendalo kunye nekhompyutheni kunye namava abonakaliswe ngokuyila imifanekiso, imifanekiso, ukuveliswa kwemveliso kunye neendlela ezikhoyo zokushicilela kunye nekhompyutheni ye-elektroniki ukudala iincwadana, izipapasho, i-infographics, i-posters, i-fliers.
-Ukudala ukudala nokuphatha imifanekiso yenkcubeko, iikhontrakthi kunye neendlela zokudala usebenzisa i-Photoshop / Illustrator / InDesign kunye nezinye izinto zewebhu kunye nezixhobo ezinxulumene neemifanekiso.
-Ulwazi malunga neendaba zobugcisa, iintetho, njl. Kwiwebhu.
-Ubuchule ekusebenzeni ngokufanelekileyo kwinkalo yenkampani ejoliswe kwiinkonzo. Izakhono eziboniswe ngokubhaliweyo ngokubhaliweyo, ukuphonononga ubungqina, kunye nezakhono zokuhlela; Ukukwazi ukuphonononga ukuprintwa okuncinci, ukukwazi ukuhlukanisa imibala kwimbala epheleleyo imibala xa kutyalwa ubungqina, kunye nokukwazi ukuphonononga amaxwebhu e-elektroniki.
-Izakhono zomlomo, ezibhaliweyo kunye nezakhono eziqhelanisiweyo zokunxibelelana nabanini bemveliso, amaqela eeprojekthi kunye nabathengisi ukuqinisekisa ukugqitywa kweeprojekthi ezifanisa okanye ezigqithiseleyo kulindeleke.
-Kwazisa ukubhalela ikopi yokudala kunye negrama.
-Ubuchule obusebenza kwiiprojekthi ezininzi ezingahambelaniyo, kunye nokubeka izinto eziphambili ngokubhekiselele kukulindelwe kolawulo.
-Ukusebenzisa i-Google Analytics kunye neziphumo zokutolika ekusebenziseni isayithi lokulandelela.
-Ubuchule bokusebenzisa nokuphumeza uphando olususela kwiWeb.
-Ubuchule kunye nevidiyo kunye nokuveliswa komsindo kunye nekhowudi yokuhanjiswa kwewebhu.
CES2017 Inkundla ye-Ultra HD ndiphila	2017-07-11
Previous: I-HITACHI Z-HD5000 Iikhamera Ii-Fuel Iziphumo zokuPhumela kweeMidlalo eziPhambili kwiBinghamton University Athletics
next: #NewTekInc: Ukutshabalalisa i-Video yeVideos ye-NA!
Archives Khetha inyanga Julayi 2018 (500) Juni 2018 (869) Meyi 2018 (871) Epreli 2018 (831) Matshi 2018 (780) NgoFebruwari 2018 (685) NgoJanuwari 2018 (605) Disemba 2017 (396) Novemba 2017 (712) Oktobha 2017 (835) NgoSeptemba 2017 (608) Agasti 2017 (583) Julayi 2017 (710) Juni 2017 (543) Meyi 2017 (621) Epreli 2017 (695) Matshi 2017 (704) NgoFebruwari 2017 (340) NgoJanuwari 2017 (364) Disemba 2016 (608) Novemba 2016 (344) Oktobha 2016 (556) NgoSeptemba 2016 (622) Agasti 2016 (1056) Julayi 2016 (532) Juni 2016 (414) Meyi 2016 (505) Epreli 2016 (713) Matshi 2016 (743) NgoFebruwari 2016 (382) NgoJanuwari 2016 (122) Disemba 2015 (358) Novemba 2015 (327) Oktobha 2015 (152) NgoSeptemba 2015 (259) Agasti 2015 (440) Julayi 2015 (276) Juni 2015 (140) Meyi 2015 (128) Epreli 2015 (435) Matshi 2015 (289) NgoFebruwari 2015 (298) NgoJanuwari 2015 (131) Disemba 2014 (103) Novemba 2014 (194) Oktobha 2014 (149) NgoSeptemba 2014 (381) Agasti 2014 (250) Julayi 2014 (287) Juni 2014 (363) Meyi 2014 (231) Epreli 2014 (744) Matshi 2014 (560) NgoFebruwari 2014 (427) NgoJanuwari 2014 (289) Disemba 2013 (137) Novemba 2013 (545) Oktobha 2013 (290) Julayi 2013 (26) Meyi 2013 (13) Epreli 2013 (1) Matshi 2013 (2) 0 (306)
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "UMSEBENZI WOKUPHEPHA". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/graphic-designer-14/. Enkosi.